Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Momba ny Tseky » Miarahaba ireo mpitsangatsangana amerikana niverina ny Repoblika Tseky
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Car Rental • Vaovao Momba ny Tseky • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao • fanorenana • Resorts • tompon'andraikitra • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Manatevin-daharana ny lisitry ny firenena tandindomin-doza i Etazonia, mamela ny mpizahatany amerikana hiditra ao amin'ny Repoblika Czech.
Eo ambanin'ny COVID-19, mampiasa rafitra jiro fifamoivoizana ny Repoblika Czech raha takiana amin'ny firenena samihafa ny fidirana.
Ny olom-pirenena amerikana dia afaka mivezivezy ao amin'ny Repoblika Tseky hatramin'ny 90 andro amin'ny maha mpizahatany azy nefa tsy mila visa.
Ny sarontava KN95 na FFP2 dia takiana hiditra amin'ny magazay, seranam-piaramanidina, fitateram-bahoaka rehetra, paositra, ary taxi na fizarana fizarana.
Iray amin'ireo fotoana nandrasantsika rehetra io! Tamin'ny 21 Jona, 2021 dia avela hiverina ao amin'ny Repoblika Tcheky eo ambanin'ireo lalàna izay nampiharina talohan'ny areti-mandringana. Midika izany fa afaka mivezivezy ao anatin'ny Repoblika Czech mandritra ny 90 andro ny olom-pirenena amerikana amin'ny maha mpizahatany azy nefa tsy mila visa.
Eo ambanin'ny COVID-19 dia mampiasa rafitra jiro fifamoivoizana ny Repoblika Tseky amin'ny fitakiana fidirana avy amin'ny firenena samihafa. Ny olom-pirenena, ny mponina maharitra ary ireo manana trano maharitra avy amin'ny firenena ahiana (maitso) - anisan'izany i Etazonia - dia afaka miditra ao amin'ny Repoblika Tseky fa tsy mila fanandramana na karokantinina. Mbola misy fetrany ny firenena hafa voasokajy ho risika antonony, avo, avo dia avo ary lehibe. Ny fetra dia manomboka amin'ny fandrarana fidirana amin'ny dia tsy ilaina (toy ny fizahan-tany sy ny namana mitsidika) na ny ambaratonga samihafa amin'ny fanandramana sy ny quarantine. Fanamarihana iray lehibe: mihatra amin'ny fidirana amin'ny Repoblika Tseky io status maitso sy atahorana ambany io, saingy tsy mihatra amin'ny faritra eropeana na Schengen manontolo. Ny mpitsangatsangana amerikana dia tokony hanamarina izay takian'ny tsirairay isaky ny firenena tadiaviny.
Raha vao eny an-kianja any amin'ny Repoblika Tseky, dia misy lalàna tokony ho fantatra. Ny satan'ny fidirana maitso sy atahorana ambany dia mamela ny mpandeha amerikana hiditra ao amin'ny firenena Misy dingana fanampiny ho an'ny zavatra toy ny fisakafoanana ao amin'ny trano fisakafoanana (ao an-trano sy any ivelany), miditra amin'ny tranombakoka, manatrika hetsika amin'ny besinimaro, na manamarina trano fandraisam-bahiny. Ho an'ireo traikefa rehetra izay tsy hay hadinoina ny fialan-tsasatra, dia mila asehon'ireto manaraka ireto ny mpandeha:
fitsapana PCR ratsy latsaky ny 3 andro
fitsapana antigen ratsy latsaky ny 24 ora
vaksinina tokana: porofon'ny fatra 14 andro lasa, tao anatin'ny 9 volana lasa
vaksinin'ny doka roa: porofon'ny 22 andro aorian'ny 1st fatra, ao anatin'ny 90 andro farany
vaksinin'ny doka roa: porofon'ny 22 andro aorian'ny 2nd fatra, ao anatin'ny 9 volana lasa
porofom-pitsaboana amin'ny fahasitranana tamin'ny COVID-19 tao anatin'ny 180 andro lasa
Ny mpitsangatsangana dia tokony hanamarina ihany koa amin'ny kaompaniam-pitantanana fiaramanidina manokana hanaovana fitsapana, facemasks, ary zavatra hafa takiana, indrindra raha mifandray amin'ny firenena hafa. Orinasa tsirairay dia mety manana fepetra takiana. Mety hanampy amin'ny fitondrana fampahalalana pirinty sy loharanom-pahalalana fanampiny (oh: saron-tava) mba hizotra tsara amin'ny dianao.
Ny mpizahatany koa dia te-hanangona maska ​​manokana ho an'ny Repoblika Tseky. Ny takotra KN95 na FFP2 (antsoina koa hoe "respirator") dia takiana amin'ny fidirana amin'ny fivarotana, seranam-piaramanidina, fitateram-bahoaka rehetra (ao anatin'izany ny lampihazo sy ny fijanonana), ny paositra ary ny taxi na ny fizarana fizarana. Ny saron-tava na saron-tarehy hafa dia ilaina amin'ny tontolo ivelany izay tsy ahafahana manalavitra ny fiaraha-monina. Mihatra amin'ny olon-drehetra ireo fitsipika ireo, ao anatin'izany ny mpandeha vaksinina mora vina (maintso).
Ka azo antoka fa mbola misy tadin-dokotra vitsivitsy hitsambikina, fa indrindra indrindra, faly izahay fa niverina ny dia! "Efa ela no niandrasantsika an'io," hoy i Michaela Claudino, talen'ny Czech Tourism USA & Canada. “Manantena izahay fa afaka maka fotoana hijerena ireo toerana malaza ireo mpizahatany, nefa koa hahafantatra ny sasany amin'ireo vatosoa miafina an'ny Repoblika Czech. Ny fijerena ny maritrano, kolontsaina, sakafo, zava-pisotro ary fialamboly tsy mampino dia hahatonga ny dianao ho mendrika ezaka bebe kokoa. ”